Maitiro ekudzikisira kubva kuIOS 8.4.1 kuenda kuIOS 8.4 | IPhone nhau
Maitiro ekudzikisira kubva kuIOS 8.4.1 kuenda kuIOS 8.4
Sezvo imi mese muchiziva, Apple yakaburitsa iOS 8.4.1 nemusi weChina ndokuvhara mukana wekuita iyo isina kubhadharwa jailbreak nematurusi aivapo. Nhau dzakanaka ndedzekuti Saurik yakaburitswa Cydia Impactor, iyo inotibvumidza kuti tidzorere zvakananga kubva kune yedu iPhone/ iPod kana iPad kutichengeta isu mune vhezheni iri munjodzi yekuparadzwa kwejeri uye izvo Apple yagara ichibvumidza nguva inonzwisisika isati yamira kusaina vhezheni yapfuura kunzvenga izvozvo, kana tichigadzirisa, isu takasara nekutadza kwakakomba.
Chero bedzi iyo iOS 8.4 yakasainwa, iko kudzikisira kunogona kuitwa uye, neizvi, tinogona jailbreak yedu iPhone / iPod kana iPad. Iyo nzira iri nyore, iwe unongoda chete kutora iyo .ipsw faira usati wadzorera. Isu tinokuudza zvese zvaunoda mushure mekusvetuka.
1 Maitiro ekudzikisira kubva kuIOS 8.4.1 kuenda kuIOS 8.4
2 iOS 8.4 haichasainwa
iOS 8.4 haichasainwa
Ngatiendei kune iyo peji ipsw.me nokuti tarisa kana iOS 8.4 ichiri kusaina.
Isu tinosarudza vhezheni yedu uye kurodha pasi. Kuti uzive chaizvo kuti ndeipi modhi ye iPhone / iPod kana iPad yatinayo, zvakanaka kuti ubvunze nayo nebhokisi.
Isu tinobatanidza mudziyo wedu kukombuta.
Isu tinovhura iTunes uye tinosarudza mudziyo wedu kumusoro kumusoro kuruboshwe.
Con alt chakatsindirwa (switch in Windows) tinodzvanya pa Dzosera.
Muhwindo rinowoneka, isu tinosarudza iyo .ipsw faira yatakatora pasi padanho rechipiri tikabvuma.
Iye zvino isu tinongofanirwa kumirira kusvikira chishandiso chapedza kudzoreredza nekuisa iOS 8.4.
Iko kune mukana wekuti iyo haizorege iwe udzore, asi izvi zvinogadziriswa nekumanikidza iyo DFU modhi. Kune izvi tichaita zvinotevera:
Tinodzima iyo iPhone/ iPod kana iPad.
Isu tinobatanidza iyo iPhone / iPod kana iPad kune komputa.
Tinodzvanya iyo bhatani remagetsi kwemasekonzi mashanu.
Pasina kuburitsa bhatani remagetsi, tinodzvanya bhatani rekutanga uye tinobata zvese kwemasekonzi gumi.
Isu tinosunungura bhatani remagetsi uye tinobata bhatani rekutanga kusvikira iwe waona iyo iTunes chiratidzo chinoratidza kuti iri mune yekudzosa maitiro.
Iye zvino tava kuenda padanho rekutanga redzidziso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzikisira kubva kuIOS 8.4.1 kuenda kuIOS 8.4
Izvo zvinoita kusevha foni yangu kubva mukukanganisa-1 kana uchiedza kudzoreredza yangu iphone mushure mekunge yapinda mukugadzirisa mode kana uchiedza kugadzirisa kusvika 8.4.1.
Chinhu chimwe chete ichi chakaitika kwandiri, handinzwisise pamusoro pako uye zvinonditsamwisa
Paive nemidziyo yeN, asi pakanga pasina maduramazwi uye pasina girama makirasi.
Nhasi na14: 05 nguva yeSpanish, 8.4 ichiri kusainwa
Carlos RaGo akadaro
Pandinopinda peji, ZIP faira inotorwa kwandiri, uye pandinoivhura, mafaira chete uye maforodha anoonekwa, kwete iyo IPSW faira. Ndingaite sei kuti iite senge inodzoreredza?
Pindura Carlos RaGo
Pedro Benedetti Gamez akadaro
chikuru chakashanda zvakakwana uye ndakafunga kuti ndakanga ndarasikirwa nerebrebreik
Pindura Pedro Benedetti Gamez
Apple ichiri kusaina iOS 8.4 Ini ndoda kudzikisira
Ramba uchisaina ??
Mhoro Manu. Vakarega kuisayina mazuva akati wandei apfuura (kana imwe vhiki, handirangarire).
Samsung inopa iyo nyowani Gear S2, yazvino smartwatch
Zvikonzero zvandinofunga Apple Music iri nani pane makwikwi